Sipra dia hanaisotra ny 'pasipaoro volamena' avy amin'ny vahiny 26
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Sipra dia hanaisotra ny 'pasipaoro volamena' avy amin'ny vahiny 26
Ny manampahefana Sipra dia nanambara ny fananganana programa fanafoanana ny pasipaoro fanjakana izay natolotra an'ireo teratany vahiny isan-karazany ho takalon'ny famatsiam-bola. Raha atambatra dia kasaina hofoanana izany Sipra zom-pirenena avy amin'ny vahiny 26.
Rosiana sivy, Maleziana iray, Iraniana iray, Keniana roa, sinoa dimy ary Kambôdzianina valo no ho very zom-pirenen'i Siprosy. Tsy ambaran'ny tompon'andraikitra amin'ny fanjakan'ny nosy ny anaran'ireo olona voakasik'izany.
Andro vitsy lasa izay, ny filohan'i Sipra, Nikos Anastasiadis, dia nanambara fa izay rehetra nahazo zom-pirenena cypriot izay manitsakitsaka ny lalàna sy lalàna dia hoesorina aminy.
Iza amin'ireo tanàn-dehibe amerikana no manana Internet haingana sy haingana indrindra?
Etihad Airways hitondrana marary Saodiana any Abu Dhabi